Hidhamuu aanga'oota ABO ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu waliin dubbachaa akka jiru Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise.
Walitti qabduun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Aadde Birtukaan Miidhagsaa waa'ee hidhamuu aanga'oota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) ilaalchisee 'qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin dubbachaa jirra' jette.
Walitti-qabduun Boordichaa kana kan jette kaleessa wayita galmee kaadhimamootaafi dhimmoota kanaan walqabatan irratti aanga'oota paartilee siyaasaa waliin marii taasistetti ture.
Marii sanarratti gaaffii aanga'oota paartilee siyaasaarraa ka'aniif deebii kan kennite Aadde Birtukaan, namoota siyaasaa mana hidhaa jiran dhimmisaanii mana murtiin ilaalamaa jiru filannoo dhufu irratti dorgomuudhaaf kaadhimummaan galmaa'uu hin danda'an jetteetti.
Marii ture kanarratti Dubbi Himaan ABO Obbo Battee Urgeessaa, miseensonniifi aanga'oonni ABO dhimmisaanii mana murtiin cufame, akkasumas kan abbaan alangaan himannaan irratti banu hin qabu ittiin jedhe garuu ammallee mana hidhaatii hin bane jiraachuu ibseera.
Miseensonni "kanneen mirgisaanii seeraan irraa hin fudhatamiin" garuu ammoo mana hidhaa jiran kaadhimummaan dhiyeessuun ni danda'amaa? jechuun Obbo Batteen gaafatee ture.
Walitti-qabduun Boordii Filannoo Aadde Birtukaan Miidhagsaa waa'ee miseensota ABO mana murtiirraa dhimma hin qabne garuu ammoo mana hidhaa jiranii 'qaama dhimmi ilaallatu waliin' dubbachaa jirra jetteetti.
"Hanga beellama hin qabaannetti [kan mana murtii] sababiin ittiin mana hidhaa turaniif hin jiraatu," kan jettu Aadde Birtukaan, dhimma kanarratti mootummaa naannoo Oromiyaa waliin dubbachaa jirra jechuun deebiste.
Haata'u malee, kanneen mana hidhaa jiraniifi dhimmisaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiran kaadhimummaatiin dhiyeessuu akka hin dandeenye dubbatte.
Walitti-qabduun Boordii Filannoo kun, namoonni dhimmisaanii mana murtiidhaan ilaalamaa jiru kaadhimummaatiin galmeessisuudhaaf seerri filannoo akka hin hayyamne ibsitee.
Hidhamtoota Siyaasaa Oromoo